Diiqa iyo Taangada yaryarkii ayaa ku aaday! – Bashiir M. Xersi
Diiqa iyo Taangada yaryarkii ayaa ku aaday!
Date: 15 Jun 2014Author: Bashiir M. Xersi 1 Comment
Waa maalintii u dambaysay ee dhammaadka todobaadka, ka dib laba maalin oo nasiino iyo bajiino ahayd, oo berri waxaa billaabanaya todobaad kale. Ogi in dunida Muslinka uu todobaadku u billaw dorraad oo Sabti ah, haddana, halkan aan joogaa (GALBEED) maadaama la yiri waa “DHUL GAALO” waxay ugu duwan yihiin Muslinka waa inay jirtaa, waxaanaba ka mid ah, in xitaa todobaadku uusan isku maalin u billaaban, ee lama maalin oo kala duwan uu u kala billowdo.
Ardadu maalmaha waxay u neceb yihiin galabta Jimcaad, oo berri oo kale ay Sabti tahay, ka sokow, inay Sarbi iyo Gumar soo gurayaan lagu garaaci doona (waa balaayo iyo musiibo gacmahaaga ku doonee), haddi maadaama ay laba maalin dugsi iyo deyrii ka maqnaayeen, oo ay ciyaar iyo ku jireen camal la’aan, berri waxaa sugaa Macallin Baaskii dugi Quraanka joogay, oo aan naxariis iyo lahayn dhimrin, aan ka ahayn dil iyo garaac mooyee. Marka wadna kurkur iyo uma yara cabsi badan. Sidaa oo kale, dadka waaweyn ee shaqeeya, maalmaha iyana waxay u neceb yihiin maalinta ugu dambaysa fasaxooda, oo ah Jimcaha dhanka Dunida Muslinka ama Axadda dhanka Galbeedka iyo wixii ku dhaqan ah.
Anoo maanka iyo madaxa ku haya, oo is leh, maantaa kuugu dambaysa bajiinadii todobaadkee si habsami leh u qaado, oo berri hawlahaagii caadiga ahaa ayaa ku sugayee, waa kan Same oo indha ku qadiin leh, ood mooddo inuu xaloo dhan dhafarsanaa, hoostaydana ka soo mud yiri. Saan inta ka naxay ku iri: “War Same, see wax kaa yihiin maanta? Miyaad xanuunsan tahay mise xalay ayaad dhafartay? Salaaman dabadeed dabcan.” Inta il qalloocan igu eegay, ayuu igu yiri: “Waxa iga muuqdaa waa dhibkii aad ii geysatay raadkiisa, oo aanan hubin inuu iga dhammaaday iyo in kale, balse, ma doonayo inaan eed aan ka gudubnay dib kuugu celshee, galabta waad yara didsan tahaye, maxaa jira?”
“Maya, wax kale ma jiraane, kaliya waxaa naga sii dhammaanaya fasixii yaraa ee labada maalin ahaa, wax kale iyo dareen ma jiraan.” Ayaan ku iri. Oon u sii raacshay: “Wali waxan aad goconee, ee sidan kuu duugay eedan se ii sheegayn ayaan garan waayey waxa ay yihiin!” markaa buu igu yiri: “Jabkaasi igu dhacyaye, horta bal aan xilligan ka gudbo, waaba wax aan loo laaban doonin, inta wax iska baddalayaan”.
Inta kor iyo hoos isu eegay, oo haddana, aniga eegay ayuu igu yiri: “Sida aan u aal waa ii jeeddaaye, waqti badan kulama sii joogi karee, “Diiqa iyo Taangada yaryarkii ayaa ku aaday!”.
“Yaah” ayaan ku iri, oo inta aniga dhami is goday, si aan garto waxa uu yiri ayaan u dhag raaracshay. “Ima maqal miyaa?” ayuu igu yiri. “Ku maqlay, balse, ma garan waxa aad i tiri” ayaan anna ku iri.
“In kasta oo maahmaahi ka jirto, qofka “YAAH” ku yiraa, haddana, anigu kugula soo dhiirran maayee, waxaan ku iri: “Diiqa iyo Taangada yaryarkii ayaa ku aaday!“ ayuu igu yiri, isagood mooddo inuuba hadalku dhibayo. “Maqlay, balse, ma garan ujeedka mana aqaan Diiqa waxa aad ka waddo, haddii uusan Dibigii iyo Caanihii daba socon, balse, Taangada waa qiyaasi karaa, haddaad Arijentiin iyo ciyaartoodii aad uga jeeddoo” ayaan ku iri.
Markaa buu inta dhoolla caddeeyey igu yiri: “Markan waa soo dhawaysay, oo qaybta dambe waaba saa, in kasta oo uuba yahay eray aan la soo qaban waayi karin, balse, ujeedka dhabta ah ciyaartii qoobka ka ciyaarka ahayd ma ahan, oo waa wax kale” markaa baan ku iri: “Bal iiga dhac waayehee, waxa aad ka waddo ee aad ula jeeddo”.
Markaa buu yiri: “Caawa waxaa ciyaaraya….” Saan hadalkii ka dhexgaloon iri: “Wali iyo ciyaaraa! Malaha waxay igu qasbaysaa inaan mar walba oo aan kula kulmo aan u sii diyaargaroobo ciyaar ka sheekaynteen uun” markaa buu yiri: “Mar walba sidaa ma ahan, mana noqon doonto, balse, waa uun marka xiiso ay leedahay ama ay tahay fursad aan marar badan na soo marin (XILLIYEYSAN micnaha)”.
Anoo u damqanaya ayaan ku iri: “Yaanan ku daahin aad nasatide, ii sheeg maxaad uga jeeddaa Diiqa iyo Taangada, waana filaa inuusan sidii Baastadii iyo Bataatigii ahayn?” Markaa buu yiri: “Wax weyn maba ka kala duwana, oo Diiqa waxaan uga jeeday xulka Faransiiska oo caawa ciyaaraya, halka aan Taangada uga jeeday xulka Arijentiin oo isna caawa safanaya.”
“Haa” baan ku iri, una sii raacshay: “Haddaan ku gartay Alleyhe.” Markaa buu igu yiri: “Haddaad garatay, waan kaa sii tagayaa, oo iska sii luudayaa, ee isma dhaafno.” Markaa baan ku iri: “Wali waxaa iigu kaa dhimman inaad FIISAHA ii macnayso, balse, kuma sii haynayo intan ka badan, ee sii nabadgal”.
Inta iga dhaqaaqay ayuu u sulsulay sidii Rati dabran oo kale ama qabbir lagu dhuujiyey, oo runtiina laga dareemayo xanuunka ama jirrada haysa dhafarba ha ahaatee.
Previous Previous post: Baastada iyo Bataatiga keebaa la cunaa?!
Next Next post: Khumayani iyo Boko Haram maxaa kala haysta?!
One thought on “Diiqa iyo Taangada yaryarkii ayaa ku aaday!”